Ukusakaza ku-Linux usebenzisa i-DLNA | Kusuka kuLinux
Ukusakaza ku-Linux usebenzisa i-DLNA
Ngokuvela kwe amathelevishini lokho kungaba funda okuqukethwe ku-intanethi, ikakhulukazi ngokusebenzisa DLNA. Kubalulekile ukwenza ama-PC ethu amancane amaseva wamafayela ukuze ukwazi ukuwabuka ngqo kusuka ku-TV (amavidiyo, izithombe, umculo, njll.) Uma une-TV noma enye idivayisi esekela i-DLNA futhi ukhathele ukudlulisa amafayela kwidiski USB, nasi isixazululo.
Okokuqala incazelo emfushane ye-DLNA. I-DLNA (Digital Living Network Alliance) yinhlangano yabenzi be-elekthronikhi kanye nabamakhompiyutha abavumile ukudala uhlobo lweleveli ehambisanayo yazo zonke izinhlelo zabo. I-DLNA ivumela amadivayisi ahlukene angaba ngaphakathi kwenethiwekhi efanayo ukuthi axhumane ukuze abelane ngokuqukethwe okuhlukile. Inzuzo engayinikeza ukusetha okulula nokusebenza okuhlukahlukene. Lolu hlelo lungasebenza kumanethiwekhi we-Wi-fi ne-Ethernet.
Lapha ngiphakamisa isisombululo esizenzakalelayo ngokuphelele, esiqukethe ukusebenzisa isoftware yeMiniDLNA. Imayelana nokwabelana ngefolda futhi konke okuqukethe kwenziwa kubonakale kumakhompyutha kunethiwekhi. Kumele sitshele isoftware yokulanda ekhethiwe ukusindisa yonke into kumafolda esiwabelana ngawo. Lolu hlelo lusebenza ku-Linux futhi lumahhala.
Sisebenzisa imiyalo elandelayo njengezimpande:
thola ukuthola ukufaka okubalulekile apt-get -y ukufaka libavutil-dev libavcodec-dev libavformat-dev libflac-dev apt-get -y ukufaka libvorbis-dev libid3tag0-dev libexif-dev apt-get -y ukufaka libjpeg62- dev libsqlite3-dev
Ngemuva kwalokho kufanele ulande ifayela le- ikhodi yomthombo ye-miniDNLA, yivule uziphu bese uyihlanganisa:
./configure make make install cp linux / minidlna.init.d.script /etc/init.d/minidlna chmod 755 /etc/init.d/minidlna update-rc.d minidlna okuzenzakalelayo
Uma sekufakiwe siyayilungisa ngokuhlela ifayela le / /etc/minidlna.conf
Ukuyifaka njengensizakalo, uma siqala kabusha ikhompyutha, iMiniDLNA izoziqalela yodwa. Akukho okunye okumele ukwenze.
Umthombo: Ochwepheshe beLinux
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Ukusakaza ku-Linux usebenzisa i-DLNA
Ngemuva kokuzama iMediatomb, iMinidlna, Ushare. Futhi ngokuba nezinkinga eziyinkulungwane neyodwa zokuzilungisa kahle, ezinye ngikwazile ukuzenza zisebenze, ngemuva kwesikhathi eside ngilwa namafayela wokumisa, uma kungeyona into eyodwa kungenxa yokunye, ezinye angizitholanga zivela ku-Samsung TV yami.
Kepha ngithole i-RYGEL, isendaweni yesoftware, ukuyifaka ngawo wonke ama-plugins ayo, futhi yilokho kuphela. Uhlelo "ukumiswa kwe-rygel" luyakhiwa, uma ulivula uthola iwindi lokukhetha amafolda ofuna ukuwabelana ngawo (ngokuzenzakalela usuvele ukhethe amafolda wakho wemultimedia) nemenyu yokudonsela phansi ukukhetha uhlobo loxhumano (wlan0 , eth0 njll ...) uyinikeza ukonga futhi konke kusebenza ngokufanelelyeeeeee.
Ngemuva kokulwa no-3 owedlule bekuvele kubonakala kuyindida kimi ukuthi abatholanga okuthile okulula, ukuthi ngokuchofoza okungu-3 usuvele uyasebenza. futhi ungahambi uzungeza ukushintsha amafayela wokucushwa uze uhlanye.
Futhi into enhle ukuthi akukho nolunye ulwazi ngaye emakhasini ngeSpanishi.
Sawubona, ngifake i-rygel futhi nginezintandokazi ze-rygel. Manje ngenzenjani ukudlala amafayela kunethiwekhi? Ngisebenzisa luphi uhlelo? Ngingu-newbie ngakho-ke izincazelo zicacile futhi zilula. Ngibonga kakhulu
Amadivayisi ahambisanayo e-DLNA awadingi into efana ne- "program." Uma unethelevishini ebangeni eliphakathi nendawo, ngokwesibonelo, kumamenyu afanayo uzothola izinketho zokuthola amaseva e-DLNA, finyelela kumafayili awo bese uwadlala. Bangaba namanye amagama, kepha lolo lwazi oluthile, kukumkhiqizi wakho ukuluxazulula futhi akunikeze imininingwane. Awukwazi ukunikeza impendulo ejwayelekile, akunangqondo kangako.
Ngiyabonga ngisanda kufaka iRygel kuDebian futhi isebenza kahle! Bengivele ngilahle ithemba lokukwazi ukubuka amafayela wemultimedia ku-TV.
I-louis ebomvu kusho
Sawubona. Ngifake iRygel yokwabelana ngama-movie agcinwe kwi-hard drive (ntfs) ye-PC yami futhi ayikho indlela yokubona ifolda eshiwo kumamukeli (i-Android). Ingikhombisa amafolda eza ngokuzenzakalela (umculo, amavidiyo nezithombe), kepha angiyiboni leyo folda kwenye i-hard drive. Noma ngubani uyazi ukuthi kungaba yini inkinga? Ngiyabonga!
Phendula uLuis Rojo
UDario Soto kusho
akangifundeli i-avi ...
Phendula uDario Soto
buyekeza libavcodec, libavformat, onke ama-libav, woza
yini i -y in apt-get for?
Lokhu futhi kungisiza ukuthi ngabelane ngamafolda kunethiwekhi sengathi ngikwenza kusuka kusamba?
Ngalokhu kulungiswa ngiyabona okuqukethwe kwe-multimedia kusuka kukhonsoli efana ne-ps3 noma i-360?
i -y injalo ukuze uhlale uphendula ngoyebo kuyo yonke imibuzo yomyalo
Uyifaka futhi uyilungiselele kanjani iPS3 Media Server?
Ngakha uhlelo lokusebenza lokukhiqiza kabusha konke lokhu njengoba ngikwazi ukukusebenzisa nge-php.
EManjaro - Arch kukhona owaziyo ukuthi angakwenza kanjani?
funa ama-AURs we-rygel onawo ngokuqinisekile
ukumisa kulahlekile ngaphambi kokwenza 😉 #trolling
kungenjalo, ephelele! ngiyabonga nge-manualillo
Sebenzisa okuthanda kakhulu kusho
Ngibhala la mazwana, ukuze kuthi uma noma ngubani enenkinga efanayo yokusebenzisa i-dlna ku-smartv yabo njengoba nganginabo ekuqaleni nge-kde plasma, ngoba ku-linux mint ngangingenankinga ekusebenzeni kohlelo lokusebenza, kepha ngifudukela ku-kde ukuze ngisebenze kahle inikeza ukuthi ifoni yakho ixhumeke ne-kde nganoma yisiphi isikhathi nge-usb, i-wifi noma nge-hostpot.
Ngibe nenkinga yokukwazi ukusebenzisa i-rygel ku-kde plasma, nangemva kwemizamo eminingi inqume ukumisa ukusebenzisa uhlelo ngezindlela eziningi, njenge-terminal, amafayela wekhasi lewebhu, nangokuthola noma isikhungo sesoftware.
Ngohlelo lwe-muon package manager olufakwe ngokuzenzakalela ku-kde plasma, injini yokusesha ibheka i-rygel bese ilanda wonke amaphakheji avela futhi alungele ukusebenzisa i-rygel futhi asebenzise i-smart tv yakho. noma yiluphi usizo abaludingayo bhala wg000050@gmail.com
Ukusetshenziswa kwe-minidlna ne-rygel kuhloselwe ukwenza umphumela ofanayo, ukuhlela i-minidla kufanele usebenzise i-nano esikhundleni salokho nge-rygel kuzoba nefasitela okulula ukulisebenzisa futhi unqume ukuthi yimaphi amafolda ozowakhombisa nokuthi luhlobo luni lwenethiwekhi luxhumekile wlp3s0
Phendula ku-Sebenzisa okuthandayo kakhulu
Izithuthukisi ze-New Photo
I-Linux Deepin: enye i-Distribution-based Ubuntu ene-Gnome Shell